यस्तै हो नेपालका नेता नेपालको राजनैतिक समस्याको समाधान खोज्न मित्र देशको दुतावासमा ७ पटक गएको कुरा गर्वले भन्छन । अरु के कुरा गर्न ।
अव क्यार्नु त नि । देशाँ नेता त्यस्ता गतिछाडा छन, तर हामी आफै तिनेरुलाइ हट भनेर नेता बन्न सक्ने नि हैन । मलाइ कहिलेकाहि लाग्छ, नेपाली जनता नै खत्तम हो, नेतालाइ के गाली गर्नु ? बिदेशीले उचाल्या मान्छेलाइ नेता मान्ने नेपाली जनता नै हुन । जसको पछाडी बिदेशी छैनन,उ नेता बन्नै सक्तैन । जनताले विश्वास गर्दै नगर्ने । नपत्याए नेपालाँ गएर ६ महिना राजनीति गरेर हेरौ, थाहा हुन्छ । अव विदेशीले चढाका मान्छेमात्रै राजनीतिआँ चम्किने भएसिन परतन्त्र नेता हुँदैनन त ? फेरी जनता तेस्तइ छन, बिदेशीको गुलामी गरोस कि खुट्टै ढोगोस तेस्तइ नेतालाइ काँधाँ बोकेर हिन्छन ।
तेइ भर म चै नेता यस्तो तेस्तो नभन्नी, जनतै त्यस्ता छन हौ मित्र, बिदेशीका गुलाम मात्रै ठुला मान्छे ठान्ने । यी हामी नि बिदेशिआ नोकर भा छम, तर हाउँरो देशाँ मान्छेहरु हाम्लाइ ठुला ठान्छन । टोलछिमेक र आफन्तआ बीचाँ उदाहरण भइटोपल्याछम । तेँहि बसेर जिन्तखिभरी देशबासिआ सेवा अर्दै कपाल फुलाका मुन्छेहरु निकम्मा अरे । फ्याट्टफुट्ट खैरे बोलेर बिदेशिआ नोकर बन्या हामी जस्ता तोरीलाहुरेहरु चै - सक्सेसफुल - अरे ।
यो ठरकि पनि के के भन्छ ? कुरो क्या ल्याउने भन्या। के बोल्नु अब । राजदुत भेटेको भोली पल्ट देशले मुहार फेर्छ, हामी त भारतीय नै भैसैक्यो जस्तो।
नेपाल नामको मुलुकको नसीबमा खोपेर राखिदिएको सत्य एउटै छ भन्ने ठान्ने हो भने, भारतसंगको ऐतिहासिक घनिष्ठ सम्बन्ध र त्यो घनिष्टताले नेपाललाई रुपान्तर गरेको कनिष्ठता नै हो ।
अब यो रोकिन्न होला । रोकियोस पनि किन र कसरी? जबकि जन्मिँदै भारतीय राष्ट्रवाद मूर्दावाद र अन्तर्राष्ट्ररिय साम्राज्यवादको मूर्दावादको नारामा कखरा सिक्ने कामरेडहरूले नै कन्तविजोग देखाए भने आजिवन भारतीय गल्लीको पान चपाउँदै हुर्केकाहरूले पान गल्ली, रिक्सावाल अनि अन्नदाता प्रतिको समर्पणभाव दर्शाउनै पर्‍यो ।
यो यस्तै हो हजूर यसमा आक्रोश नपोखेकै राम्रो । तर राष्ट्रियता त्वं शरणं गरेरै भए पनि यो अर्धमुलुकलाई फाइदा हुने केही कुरा गर्दिए हुन्थ्यो क्यार त्यही पनि भएन । राष्ट्र पनि राष्टर रहेन हुन पनि केही भएन । बरू भूटान हुन पाए नि हुन्थ्यो हौ, अस्ति एकजना नेपालका विकासविदले नेपाल भूटानको दाँजोमा पुग्न कमसेकम बीस वर्ष लाग्छ रे ! हे भगवान , त्यो भारतको काखमा लुटुपुटु खेल्ने बिरालोको छाउरो जस्तो भूटानले हामीलाई बीस वर।ष पछि छाड्दिइसकेछ !
सांच्चै त्यस्ता लजिक समेटेर हेर्दा त नेपाली हुनुमा पनि लाज भइसक्यो। जाबो एउटा राजदुत ले रिगांदिनी हो त सारा देश। देशलाइ त गोल्टिनको बट्टा बनाए यिनीहरुले। कुरो सटिल लाग्यो मालाइ ठरकी जी।